Nzira yekuvhura account yekubhengi muUK?
Dai 5, 2022 Shubham Sharma Banks, UK
Chikamu chebhanga muUK chakakura zvakanyanya kana zvichienzaniswa nemamwe masekete. Mabhangi muUnited Kingdom anopa marudzi akasiyana emabasa. Heino mhedziso yemamwe emabhangi anozivikanwa muUK. Sei
Nderipi bhangi rakanakisa muUK?
Dai 4, 2022 Shubham Sharma Banks, UK
Chikamu chebhanga muUnited Kingdom chinofungidzirwa kuti ndicho chikuru muEurope uye chechina pakukura pasirese. Banking muUnited Kingdom yakagadziridzwa zvakanaka, ine zvinyorwa zvitsva zvinokurudzirwa neinocheka-kumucheto tekinoroji uye hunyanzvi. Zviri
Yakanakisa bhurasho remagetsi remagetsi muUK
Kunyangwe echinyakare echinyorwa mabhurashi emazino anoita basa rakanaka rekuchenesa meno ako. Saka nei uchifanira mabrashi emazino emagetsi kuchenesa meno ako? Bhuti remazino remagetsi rinoshanda zvakanyanya uye rakakwana. Irosi remagetsi rinokubatsira kubvisa kusvika
Best juice mixer muUK
April 28, 2022 Demi zvinhu zvekutenga, UK
Kuisa mari mune yakanakisa juicer kwaizoita kuti zvive nyore kuti zuva rako ritange netsoka yekurudyi. Kugadzira yako muto kumba neyakanaka muto musanganisi kuchakubatsira iwe kuchengetedza mari uye kubvisa zvakagadziriswa zvinowedzerwa. Kunyangwe iri
Yakanakisa induction cooker muUK
Induction cookers isarudzo yakakwana kune vazhinji vanobika kumba. Nekuti iwo akapetwa kaviri seanoshanda nesimba segasi uye anokurumidza kupfuura magetsi. Kana ichienzaniswa negasi, induction cookers izvozvi zvinodhura kupfuura nakare kose. Saka ndichivaita iyo
Ndeipi yakanakisa oximeter inowanikwa online muUK?
Vazhinji vedu tingadai tisina kumbonzwa nezve oculeter yekupomba dai yanga isiri iyo yekuparara kwe COVID iyo yakatsvaira pasi. Vamwe, asi, vanogona kunge vakangoshandisa ichi chidiki diki muzvipatara. Chii chaizvo chinonzi pulse oximeter?